90 Square Mamita Chic Chimiro Yakanaka Imba, Retro Yemahara Kutaurisa Kwakanyanya Kunyaradza | Kugara Kugadzira
musha / Interior design / 90 Square Mamita Chic Chimiro Yakanaka Imba, Retro Yemahara Kutaurisa Kwakanyanya Kunyaradza | Kugara Kugadzira
2021 / 08 / 13 kupatsanuraInterior design 4154 0
Kugara Kwemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Uyu ndiwo musha wekutanga waLili nemukomana wake. Lili nemukomana wake vese vari muindasitiri yeIT, kazhinji vanobatikana kwazvo vachishanda nguva yakawandisa, uye havawanzobika. Lily anoda vintage maitiro uye ane yakanaka aesthetic. Isu tinoirova ipapo ipapo panguva yekugadzira dhizaini uye kutaurirana kwaive kwakatsetseka. Lily, sevasikana vazhinji, akarota kuve neakasiyana kabati uye yekugezera. Aida imba yekutandarira ine chivharo chemoto. Isu takakwanisa kumuchengeta zvaaida mukugadzirwa. Lily akati zvaive zvakanaka kusangana nemugadziri ane ruzivo uye akanaka aesthetics. Ndinoda kutaura kuti ndine rombo rakanaka kuva nemutengi anotaurirana zvakanaka uye anovimba nemugadziri.
Iyo yakanakisa inotaridzika kona mumba, hapana chinoshamisira kupfuura iwo wese madziro emabhuku. Nzvimbo yemoto inotarisana nemoto uye pasofa yakasununguka inoita kuti iwe ude kuuya kumba uye kuzorora pasofa uye kuverenga bhuku. Iyo pasofa imwe chete inobva kune imwechete Lazyboy muVakuru Shamwari, yakasununguka kwazvo uye inogona kuvhurwa kuti ivate pasi.
Ceiling fan fan zvakare yakanaka kwazvo muzhizha. Imba yekuchamhembe-kumaodzanyemba ine yakasikwa mhepo mhepo convection muzhizha kana mahwindo akavhurwa. Dhesiki rinobva mumo, uye kabhuku kabhuku kapfupi padyo nayo inoshandiswa kuisa vinyl rekodhi mutambi. Iyo ine 9 mafuremu evinyl zvinyorwa pairi.
Izvo zvinogutsa kwazvo kuuya kumba uye kutenderedzwa nemabhuku ako aunofarira uye marekodhi.
Iko kicheni uye tafura yekudyira kubva kubhandi. Iwindo rekicheni rinogadzirwa nemipendero yekupeta. Iyo inopenya-yakajeka uye ine yakanaka kuvanzika, uye inoshongedza kwazvo.
Mukadzi akabatikana zvakanyanya pabasa uye kashoma kubika. Iye ane yakanyanya kudiwa kumeso kwekicheni, saka akasarudza iyo isingaonekwe simudza yakatsemurwa yakabatanidzwa mubiki. Kana uchishandisa, iyo hood inomuka yega. Iyi zvakare mhinduro yakanaka kune dambudziko remhepo yakavhurika yekicheni.
Tafura yekudyira kubva kune yechipiri nhema matanda. Chigaro chega chega chekudyira chinonyatsosarudzwa nemukadzi. Zvigaro zvekudyira neEuropean yekuvaka yekushongedza backrests zvinoratidza iyo yakasarudzika kuravira kweiye hostess.
Mufambisi anofarira Southeast Asia resort style. Iyo fanicha inowanzo gadzirwa neyakavezwa rattan uye yakasimba danda. Maketeni akasarudzawo mapofu akasimba ehuni, matoni erima ari nyore kuzorora. Pakupera kwemubhedha, chipfuva chemadhirowa uye mbatya dzakasviba mbichana dzinoiswa, izvo zvinoshanda kwazvo. Iyo yakasviba mini coconut inobvumira mukadzi uyo anowanzo kuve akabatikana nebasa kuti ave nemhepo diki yekuzorora.
Iyo tenzi yekurara uye yechipiri yekurara yakaderedzwa zvishoma kupatsanura yakasarudzika yekutarisa uye yekugezera nzvimbo. Iyo diki yekutarisa ine chengetedzo ine simba uye dhizaini yakavhurika iri nyore kwazvo kuvasikana vane zvipfeko zvakawanda kuti vawane mbatya. Nzvimbo yekugezera haina kukura asi zvakare yakaomarara. Munzvimbo diki, takasarudza bhati yekugezera yakavakirwa. Iwo mataira madiki madiki ekunyepedzera machena mataira kudzivirira monotony.
Imba yekurara yechipiri yakagadzirirwa mubhedha webhokisi. Inotaridzika kunge kabhineti kana pasina munhu akatenderedza mukati mevhiki. Izvi zvinosunungura nzvimbo yeimba yekuitira kana iyo yoga kamuri. Kune mamwe makabati padivi payo ekuchengetera mbatya uye nezvimwe. Yakanyanya kukurudzirwa kune avo vanofanirwa kuchengetedza mashandiro eimba yevaeni yekushandisa nguva nenguva.
Mukadzi wepamba aida kuti imba yekugezera ive yebhuruu. Isu tinoisa mataira ebhuruu mushower uye chena vintage strip tile mune dzimwe nzvimbo. Iyo iri-pamadziro faucet uye madziro-akaisirwa dombo rakanyorwa rimwe-chidimbu singi rinopa imba yekugezera yakachena uye yakashambidzika kutaridzika.
Tsika mbiri-yekurara, mbiri-yekugezera, yakajairika chimiro
Mushure mekugadzirisa zvakare
1, Mutsara wese wekuchengetedza makabati akagadzirwa pasi pehwindo pamusuwo. Inowedzera iko kuchengetwa kwemusuwo, uye zvakare inoisa pasi izere muviri girazi, shangu inoshandura bhenji uye yakaturika hembe mbichana.
2, Yakaderedza saizi tenzi yekurara uye yechipiri yekurara. Izvi zvakapatsanura rakaparadzaniswa cheki uye bhati nzvimbo.
Akavhura imba yekubikira neyekugara. Tafura yekudyira inoiswa mukicheni. Zviri nyore kubatanidza yekudyira nekicheni.
4, Putsa chimiro chechinyakare chemba yekutandarira. Imba yekutandarira iri pakati pechoto. Masofa matatu uye masofa asina kuroorwa akakomberedzwa, anokodzera kutaura uye kuverenga. Tafura hombe refu yakaiswa yakatarisana nenzvimbo yemoto. Izvi zvinosangana nezvinodiwa nevanhu vaviri vanoita basa pamba. Iyo nzvimbo iri padyo netafura yakachengeterwa kabhuku kabhuku uye vinyl rekodhi mutambi.
5, Iyo tenzi yekurara inongoshandiswa chete kurara chete. Yechipiri yekurara haina chinhu iyo yoga uye kufungisisa.
Rudzi rweProjekiti: 2 yekurara
Mugadziri Dhizaina: Echo
Dhizaini yekugadzira: Shenzhen StayLiving Tsika uye Kugadzira Co.
Inoshandiswa nzvimbo: 90 mativi metres
Nzvimbo: Shenzhen, Guangdong
Kushongedza mutengo: 300,000 RMB
Pakapfuura :: Iyi OPEN Space Inogutsa Zvese ZvePfungwa Dzako. Iyo Yakazara Ne "Nzvimbo Dzakavanzwa" Zvadaro: "Nguva Yekusarudza", Iyo Piyona Clubhouse Pasi Pemifananidzo Zvinyorwa | JK Lien Dhizaini
2021 / 08 / 15 5094
2021 / 08 / 15 5664
2021 / 08 / 15 5396
2021 / 08 / 14 5218
2021 / 08 / 14 5796
2021 / 08 / 14 4994